Sanduuqa Xaaladaha Deg-degga ah Ee Qaramada Midoobey Oo Gaaray Hadafkii Ahaa US$450 Million – Goobjoog News
Isku duwaha arrimaha Banii’adnimada u qaabilsan xogheyaha qaramada midoobey Mark Lowcock ayaa sheegay in Sanduuqa xaaladaha deg-degga ah Ee qaramada midoobey uu helay sanadkan 2017-ka lacagtii loo qorsheeyay ee aheyd US$450 million.
“Waxaan ku faraxsanahay sida deeqsi-nimmada leh ee dalalka deeqaha u soo gaasriiyeen sanduuqa CERF” sidaasi waxaa warbixin ku sheegay Mark Lowcock.
Mark waxaa uu dalalka ku ammaanay si ay uga jawaabeen baahida ay qabaan 145 million qof oo u baahan gargaar banii’aadnimo isaga oo soo jeediyay in dhibkaasi si wax looga qabto loo baahan yahay 2018-ka lacag dhan $1 billion.
Sanduuqan waxaa la sheegayaa in gargaar gaarsiiyay in ka badan 20 Milyan oo qof oo abaar ku heysay dalalka Nigeria, South Sudan, Somalia iyo Yemen.
Sida qoraalkan lagu sheegay Jimciyadda qurumaha ka dhaxeysa ay sanadkii hore isku raaceen in la kordhiho lacagta sanadkii la siiyo Sanduuqa xaaladaha deg-degga ah Ee qaramada midoobey oo ah $450 million, lagana dhigo $1 billion sanadka 2018.
“ Malaayiinta dhibaateysan darood, waxaan ka codsanaa dalalka deeqda bixiya in ay lacago ugu deeqaan sanduuqa Sanduuqa xaaadaha deg-degga ah Ee Qaramada Midoobey” sidaasi waxaa yiri xogheyaha guud ee qaramada midoobey António Guterres.
Boylto xrmhnm USA cialis cialis manufacturer coupon 2019
Gzzjlm yogaez Real viagra cialis on line